Posted by ညီလင်းသစ် au 14.3.12
ပြန်ရောက်ပြီလား။ အတွေ့ အကြုံတော့ ဖတ်ဖို့ စောင့် နေပါတယ်။
အော်.. မြန်မာပြည်ကို ပြန်သွားတာလား... ဘလောခ့်တွေကို သေချာမဝင်မိတော့ အကို့သတင်းတွေကို မသိလိုက်ဘူး. နောက်တင်မယ့် ပိုစ့်တွေကို ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်နေမယ်။
နောက်ကျပေမယ့် လက်ခံမယ်ထင်ပါတဲ့ Happy Birthday ပါ Bro....
ဲမြန်မာပြည်မှာ အတော်လေး ပျော်ခဲ့မယ်ဆိုတာ သေချာသလောက်ဘဲ.
ကိုညီလင်းသစ်လက်ရာ ဓာတ်ပုံကောင်းတွေ တွေ့ရဦးတော့မှာပေါ့နော်။
အများကြီးဖတ်ဖို့ ကြည့်ဖို့ မျှော်လင့်နေပါတယ်ရှင်
ကျေးဇူးပါ ညီမရေ၊ Better late than never လို့လည်း ဆိုကြတယ် မဟုတ်လား..၊း)
ဟုတ်..၊ ပျော်တယ်ဗျ၊ ကျနော်လည်း အမြန်ဆုံး တင်ပါ့မယ်၊း)
တတ်နိုင်သလောက်တော့ ရိုက်ခဲ့တယ်ဗျ..၊ လာမယ်နော်၊
ကောင်းပါပြီဗျား၊ သူတို့လည်း ပါဖို့များပါတယ်..၊း)
သိပ် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တော့ မဟုတ်ရ ပါဘူးဗျာ၊ ကျနော်လည်း တတ်နိုင်သလောက် ကြေညာသွား ပါတယ်၊း) ဒီတစ်ခေါက်တော့ မန္တလေးက အလှမ်းဝေး နေခဲ့တယ်ဗျာ..၊း(
ပြန်ရောက်ပြီလား အစ်ကို... အစ်ကို ပြန်မျှဝေမယ့် အတွေ့ အကြုံလေးတွေကို စောင့်နေပါတယ်... ဓာတ်ပုံကောင်းလေးတွေကိုလဲ ကြည့်ဖို့မျှော်နေမိတယ်...
Waiting to read your coming blogs and photos!
ကဲ..ဒါ့ပုံတွေသာ မြန်မြန် တင်ပါအကိုရေ
ဓာတ်ပုံတွေနဲ့တွဲတင်မဲ့ ပြည်တော်ပြန်ခရီးပို့စ်လေးကို မျှော်နေမယ်နော်...း))
Wellcome Back ကိုညီလင်း..
ပိုစ့်အသစ်တွေ စောင့်နေတယ်...း)))
မြန်မာပြည်ဒါ့ပုံ ကောင်းကောင်းလေးတွေ စောင့်နေမယ်
welcome back ပါ...။ မြန်မာပြည်ပြန်လာတာ မတွေ့လိုက်ရဘူး ကိုညီလင်းသစ်ကို...။ စာအသစ်တွေ ပုံတွေကိုမျှော်နေပါ့မယ်...။
အကိုနဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ က မြန်မာပြည်ကိုမီးဝင်မီးထွက်ဖြစ်
သွားတာကိုဗျ....၊အကိုမြန်မာပြည်ရောက်ပြီး တပတ်လောက်ကြာတော့ ကျွန်တော် စလုံးပြန်ရောက်နေ
ပြန်ရောက်ပြီပေါ့ ကိုညီလင်းသစ်။ ဇွန်တော့ စာမေးပွဲတစ်ခုအတွက် စာကြည့်ရမှာမို့ တစ်လလောက်တော့ ပျောက်နေဦးမယ်။ စာမေးပွဲမှ ပုံတွေလာကြည့်မယ်နော်။
ဒါကြောင့် ပျောက်ချင်းလှလှနဲ့ ပျောက်နေတာကိုးးး
စာတွေ ပုံတွေ စောင့်ဖတ်နေပါမယ်း))
ပြန်ရောက်လောက်ပြီထင်လို့လာချောင်းတာ အတော်ဘဲ ။ ပြန်သွားတယ်ဆိုလို့ မနာလိုလိုက်တာနော် ဒါပေမယ့် ပျော်ပါတယ် ညီလင်းလက်ရာ ဓါတ်ပုံကောင်းကောင်းတွေ ကြည့်ရတော့မှာမို့ ရန်ကုန်တော့ ပါပါစေနော် :)) အားလုံး နေကောင်းကြရဲ့ လား ... ။
Welcome back ! ( seem like i'm staying at europe, lol)
Welcome back......Ko Nyi
Glad to know that your trip was smooth.I am busy with preparing for same trip.Ready to look at your photoes.
မတွေ့လိုက်ရတာ စိတ်မကောင်းဘူး ကိုညီလင်းရေ ...
လာထား..မြန်မာပြည်အလွမ်းပြေ ဓာတ်ပုံတွေကို စောင့်ဖတ်နေမယ်နော် ကိုညီရေ
ok, waiting for the interesting post.